Fihetsiketsehan'ny baolina, fitaovam-piadiana, mpitroka tampoka - TANGRUI
Adiresy fisoratana anarana
116 # Lalana Fangzheng, Faritra fampandrosoana ara-toekarena sy teknolojia Jiujiang, Tanànan'i Wuhu, Anhui
150, Teknika sy kalitao Dep.:30 izayProduction Dep.100） .
40000㎡ (Faritra famokarana totalin'ny tobim-pamokarana any Wuhu sy ny toby famokarana Wuhu City)
Zato tapitrisa mahery
OEM 30639780 sy 30639781 ARMS CONTROL Ho an'ny VOLV ...
High Quality Spring Shock Absorber-Z11069
Valiny famoahana 2018
Ny filôzôfian'ny orinasako dia ny "Career is well in specialised, ary ny fahombiazana dia azo amin'ny alàlan'ny fisainana". Izahay dia nanolo-tena tamin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny familiana knuckle, mandray ny teknolojia ho ny fotony. Ny orinasa dia voamarin'ny ISO9000 tamin'ny 2007, ary nahatratra sy nampihatra ny fitantanana kalitao TS16949 tamin'ny taona 2017. Ary manatsara ny IATF16949 amin'ny 2019. Ny sandan'ny vokatra 2018 dia manodidina ny $ 15,000,000.00.
Ny orinasanay dia nanomboka ny fanomanana atrikasa tsy misy vovoka tamin'ny fiandohan'ny volana oktobra. Hanampy amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny vokatra aorian'ny andefasana azy sy hampiasana azy io.
Fankatoavana ny rafitra
Ny mpiara-miasa aminay BYD dia tonga tao amin'ny ozininay hahazoana mari-pahaizana momba ny rafitra fitantanana kalitao TS16949 (IATF).
Mamirapiratra ny varotra fiara any Sina satria mihodina amin'ny virus ny sisa amin'izao tontolo izao
Mpanjifa iray no niresaka tamin'ny mpiasan'ny varotra tao amin'ny fivarotana Ford tany Shanghai tamin'ny 19 Jolay 2018. Toerana tokana mamirapiratra ny tsenan'ny fiara amin'ny toekarena lehibe indrindra any Azia satria manaparitaka ny varotra any Eropa sy US Qilai Shen / Bloomberg ny tsimokaretina ...
Fandinihana vaovao nataon'i DuckerFrontier ho an'ny Fikambanana Aluminium no nanombatombana fa ireo fiara mpamokatra dia hampiditra 514 kilao ny aliminioma amin'ny fiara antonony amin'ny 2026, fiakarana 12 isan-jato manomboka androany. Ny fanitarana dia misy fiovana lehibe ho an'ny ...
Ny varotra fiara vaovao eropeana dia nitombo 1,1% isan-taona tamin'ny volana septambra: ACEA
Ny fisoratana anarana fiara eropeana dia somary nisondrotra tamin'ny volana septambra, ny fiakarana voalohany tamin'ity taona ity, ny angon-drakitra indostrialy dia naseho tamin'ny zoma, nanolo-kevitra ny fanarenana ny sehatry ny fiara any amin'ny tsena eropeana sasany izay ambany kokoa ny aretina coronavirus. Tamin'ny sept ...
Hub misy kodiarana, Tyre Ball Joint, Shock Absorber fingotra, Knuckle familiana eo aloha, Hood Shock Absorber, Mpanafika tampoka fiara modely vaovao,